State Institute of Moscow Fifandraisana iraisam-pirenena - fianarana an-tany hafa
State Institute of Moscow Fifandraisana iraisam-pirenena
Institute of Moscow-panjakana Details Fifandraisana iraisam-pirenena
fanafohezan-teny : MGIMO
Créé : 1944
Aza adino ny iaraho midinika ny Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena
Misoratra anarana ao amin'ny Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena
MGIMO no malaza indrindra ao Rosia rafitra fanabeazana ho an'ny tanora amin'ny tombontsoa iraisam-pirenena. Fa ny mpianatra iraisam-pirenena, MGIMO dia sy ny maro hafa: maoderina, miarahaba, ary tsaina mandrisika toerana nianatra tany Rosia tanàna lehibe indrindra.
MGIMO ny mpianatra isan-karazany tenan'ny 6,000 dia nalaina avy an-tampon'ny Rosiana isan'ny mpianatra sy avy amin'ny mpiara-miasa anjerimanontolo manerana izao tontolo izao. MGIMO manolotra malalaka isan-karazany ny antokony amin'ny undergraduate sy nahazo diplaoma sehatra - avy amin'ny iraisam-pirenena raharaha, siansa ara-politika, toekarena, ary ny lalàna iraisam-pirenena, ny asa fanaovan-gazety, fitantanana raharaham-barotra, sy ny politikan'ny angovo. Undergraduates iraisam-pirenena dia afaka mampihatra ny tena anglisy-nampianatra B.A. fandaharana na misafidy amin'ny taranja sarotra sy mampientam-po ao amin'ny Rosiana. Mpianatra mitady ny Tompo mari-pahaizana dia afaka mampihatra ny iray amin'ireo ny fangadiana MGIMO roa-ambaratonga fandaharana, natolotra eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, na mitady toerana ao amin'ny iray mihoatra ny telo-polo MA fandaharanasa ampianarina ao amin'ny Rosiana.
Fa ny tantara, MGIMO Mitohy ny remake mihitsy. Tao anatin'ny dimy taona, dia namorona ny anjerimanontolo maro fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny fitarihana andrim-panjakana manerana izao tontolo izao. MGIMO dia hampiditra tanteraka an-Bologna mifanaraka, nitanisa ny fitsipika hentitra ho an'ny andrim-panjakana Eoropeana fianarana ambony. Ny University ihany koa nanao ny mampirisika ny mpianatra nivoatra hatramin'izay-tena, fandaharam-pianarana, sy ny toeram-pianarana ny fiainana izay mbola taratry ny nalaza ho malaza indrindra ao Rosia, ary mandroso indrindra toerana fahatakarana ny raharaha iraisam-pirenena.
Rosia Premier ONIVERSITEN'I
MGIMO no tsara indrindra ao Rosia fantatra sy malaza indrindra humanities andrim-panjakana. Izao tontolo izao izany amin'ny kilasy rehetra fahatsapana ny ny teny hoe – malaza tsara, mahaleo tena, coeducational, ary ampahibemaso ny fanafiana masina. MGIMO ny fito sekoly fanabeazana sy efatra hanodidina Institiota fianarana ambony maro departemanta, fisarahana, ary mari-pankasitrahana fandaharana, ary koa ny toerana sy ny Siantifika interdisciplinary asa fandaharan'asa mitohy mihoatra nentim-paharazana departemanta faritra.
Rosia indrindra maneran-oniversite, MGIMO no Rosiana an-trano ho an'ny mpianatra manerana izao tontolo izao efa ho 60 taona, manome mihoatra noho 5,000 nahazo diplaoma ny fanabeazana iraisam-pirenena mba miroborobo toy ny mpitarika ao amin'ny sehatra tsy miankina sy maneran-bahoaka. Ankoatry ny, MGIMO manana fifandraisana akaiky amin'ny mpitarika ny tontolo fanabeazana foibe, manerana an'i Eoropa, Asia, ny Amerika, ary Africa. MGIMO prides tena amin'ny Global fifantohana sy MGIMO dia trano ho an'ny mpianatra maneran-tany.
MGIMO University dia iray amin'ireo Rosiana voalohany oniversite mba hanatevin-daharana ny Eoropa Anjerimanontolo Association, ary dia nanao sonia ny Bologna mifanaraka. Ny filozofia MGIMO manome saram-pianarana ho an'ny mari-pahaizana Bachelor sy Mpampianatra fandaharan'asa izay fantatra manerana izao tontolo izao, miaraka amin'ny mpianatra nahazo fepetra takiana dia ny fanalahidin'ny ny asa sy ny fianarana fahafahana iraisam-pirenena. MGIMO boninahitra Doctorates no nomena tao amin'ny maneran fijangajangana.
MGIMO University manolotra isan-karazany eto amin'ny hotorina hatraiza hatraiza ny fandaharam-pampianarana sy ny specializations misy amin'ny oniversite ny ny karazana na aiza na aiza. Raha ny amin'ny fanomezana mpianatra amin'ny teny manodidina ny fahatakarana ny ankehitriny izao tontolo izao - ho izany amin'ny alalan'ny diplaomasia iraisam-pirenena, bahoaka fitantanana, raharaham-barotra, toekarena, lalàna, ary ny fanaovan-gazety, tsy lazaina intsony ny 53 fiteny izany mampianatra - MGIMO Tsy manam-paharoa.
Miavaka akademika ACCESS
MGIMO University miara-mitondra ny tsara indrindra ny liberaly lafiny kanto amin'ny oniversite ny an'ny fikarohana lehibe oniversite. Izany fomba akaiky manome mpianatra amin'ny fidirana ho mihoatra noho 1200 mpampianatra sy ny sekoly ambony mpikambana, ao anatin'izany ny 20 mpikambana feno sy mifanaraka mpikambana ao amin'ny Akademia Rosiana malaza ny Siansa, fanampiny 113 mpahay siansa sy ny 400 doctorat ny siansa kandidà. MGIMO ny oniversite dia faly amin'ny mpianatra.
WORLD malaza MIKAROKA
Amin'ny niavaka laza sy akademika sata MGIMO laharana hatrany amin'ny anjerimanontolo tena naoty. Ny fikarohana dia nampahazo maneran-tany amin'ny alalan'ny fikarohana fiarahamiasa amin'ny fitarihana Institiota ao Rosia, CIS firenena, and around the world.Eo ambany elo ny Minisitry ny raharaham-bahiny, MGIMO dia hoheverina Eritrereto-tanky politika sy ny sehatra ho an'ny adihevitra sy ny fanadihadiana ny fivoarana sy ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao raharaha, sy ny fandraisana anjara amin'ny fanadihadiana eran-tena nitady taorian'ny.
Koa satria ny nitsanganany MGIMO ny fahitana sy ny filozofia no natambatra nentim-paharazana fatratra akademika amin'ny zava-baovao ara-tsaina. Ny zava-baovao oniversite ny fandaharam-pampianarana, ampiharina over 2007-2008, indray ny fifantohana amin'ny fianarana fahaiza-monina. Ny fandaharana ihany koa ny nahita MGIMO hanana toetra vaovao rafitra niara-belona taratry siansa sy ny fanabeazana fironana, amin'ny fomba fitantanana vaovao sy teknolojia, ary hisarihana ireo mpitarika ny fanabeazana iraisam-pirenena.
akademika tsara indrindra
Ny anjerimanontolo dia fanta-daza ho an'ny akademika tsara indrindra, izany hoe ny mamiratra Rosiana mpitarika avy mianatra any izao, miaraka amin'ny Mitombo isa ny iraisam-pirenena mitovy. Isan-taona tsara indrindra ao Rosia nahazo diplaoma sekoly ambony mifaninana ho efa ho arivo toerana vaovao, miaraka amin'ny fandaharana – indrindra fa ny toekarena, lalàna, sy ny fifandraisana iraisam-pirenena – manana ho amin'ny 30 mpangataka isaky ny toerana.
MGIMO nahazo diplaoma dia ahitana filoha, praiminisitra, ary vahiny mpanompon'Andriamanitra Azerbaijan, Armenia, Belarosia, Bolgaria, Kazakhstana, Mongolia, Slovakia, Ukraine ary ireo firenena hafa.
MGIMO dia manome tsy mandroso fanabeazana, fa ny manam-paharoa fahafahana mba hahazo ny fifandraisana matihanina izay haharitra tsara mihoatra fianarana. Ny henjana sy sarotra sehatra akademika dia Hameno iray salama tontolo ara-tsosialy ny mpianatra izay fiaraha-monina sy ny Alumni dia tena mora sy miarahaba ny vahiny mpianatra. Ao amin'io tontolo iainana ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia afaka ho tonga ny namana ny rahampitso ny politika iraisam-pirenena, ara-dalàna, raharaham-barotra sy ara-tsosialy mpitarika.
LEHIBE fiainana ara-tsosialy
Beyond fianarana, MGIMO mpianatra dia mahita ny tenany voasarika ho maro fampisehoana, dihy, hatsikana alina, ary ny zava-nitranga in-javatra tsy fanatanjahantena. Various fikambanana mpianatra hameno ny kalandrie amin'ny hetsika ara-tsosialy fanampiny. Mazava ho azy, MGIMO ao Moscow, iray amin'ireo tanàna lehibe manerana izao tontolo izao, miaraka amin'ny voaomana ara-kolontsaina sy ara-tantara ny harena, mavitrika kolontsaina sady nanelatrelatra Nightlife. Izany ihany koa dia manolotra mora mahazo ny fahasamihafana sy ny herin 'ny vanim-potoana Rosia, sy ny lova ara-kolontsaina Epic. MGIMO dia fiainana mahafinaritra traikefa ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena.
Sekoly iraisam-pirenena ara-toekarena ny Fifandraisana
Lalàna iraisam-pirenena School
Sekoly ny International Fanaovan-gazety
Sekoly ny siansa politika
Business School ny iraisam-pirenena sy ny Business Administration
Sekoly ny Applied Toekarena sy ny varotra
International Institute of politikan'ny angovo sy ny Fifampiraharahana Iraisam-pirenena
International Institute ny Administration
Sekoly ny Governemanta sy ny Raharaha Iraisam-pirenena
MGIMO, izay, in Rosiana, mijoro ho an'ny Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena, naorina Oktobra 14, 1944 raha ny URSS Filan-kevitry ny Vahoaka Commissars averina alamina ny vao haingana namorona Sekoly Fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny Moscow University-panjakana ho any an-mahaleo tena Institiota. Voalohany hoe ny Institute of Fifandraisana iraisam-pirenena (Imo) ny voalohany 200 mpianatra tranainy ireo izay tafavoaka velona tamin'ny fahoriana mafy ny ady lehibe faharoa, ary dia tapa-kevitra ny hanorina iraisam-pirenena fandriampahalemana sy fitoniana.
Hatramin'ny voalohany MGIMO natao ho lasa tsy manam-paharoa sy ny fanabeazana akademika foibe fikarohana. Tsy haingana lasa mpitarika Rosia diplaomatika fampiofanana andrim-panjakana, amin'ny anjerimanontolo MGIMO manao anjara lehibe manerana ny saha ny fifandraisana iraisam-pirenena, firenena sy ny isam-paritra fampianarana, lalàna iraisam-pirenena sy ny fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena. Ankoatra, dia naka toerana teo amin'ny lohalaharana ny Siantifika ezaka, miaraka amin'ny fametrahana ny tontolo maro ara-tsiansa malaza sekoly, sy tahaka ny toeram-piasana maro mpahay siansa miavaka Rosiana, anisan'izany ny Akademian'ny Siansa mpikambana E.Tarle, L.Ivanov, V.Trukhanovskiy, S.Tikhvinskiy, N.Inozemtsev, ary Y.Frantsev.
Am-boalohany MGIMO telo ahitana sekoly: Sekoly an'i Fifandraisana iraisam-pirenena, Sekoly ara-toekarena ny iraisam-pirenena Fifandraisana iraisam-pirenena sy ny Sekolin'ny Lalàna. Nanomboka mpianatra iraisam-pirenena avy tamin'i MGIMO avy 1946. Nanomboka tamin'izay dia lasa MGIMO Alumni raharaha-pirenena, diplaomatika sy ara-dalàna ireo mpitarika any amin'ny firenena maro, miaraka amin'ny maro lasa Foreign Mpitory, lohan'ny governemanta, ary na dia filoha.
In 1954 ny Moscow Institute of Oriental Fianarana, iray amin'ireo toeram-pampianarana sy tranainy indrindra Rosiana mpandimby ho an'ny Sekoly Lasarevsky voaforona tao amin'i 1815, dia tafiditra ho any MGIMO. The Institute ny tranomboky Tena nampananana harena ny koa ny malaza Lasarevskaya famakiam-boky, izay tsy nisy lehibe noho ny mpiara tenan'ny Oriental boky sy gazety.
In 1958 MGIMO nampidirina ny misahana ny varotra ivelany, izay niasa teo ambany teo aloha ny aegis ny URSS Ministeran'ny ho an'ny varotra ivelany. Nitarika ho amin'ny fampielezana ny Sekolin'ny Fifandraisana iraisam-pirenena ara-toekarena sy ny fifantohana amin'ny fampiofanana ara-toekarena ny varotra ivelany sy ny manam-pahaizana manokana. In 1969 ny International School naorina Fanaovan-gazety.
Tamin'ny faramparan'ny taona 1980 sy ny fiandohan'ny taona 1990, ny lalina ara-tsosialy sy ara-toekarena dia nahita fiovana lehibe i Rosia mamafa fiovana MGIMO ny rafitra sy ny fandaharam-pampianarana. In 1991 vaovao Sekoly International Business sy Business Administration naorina.
Koa satria 1992 ny Institute dia tarihan'ny ny Rector, Profesora Anatoly Torkunov, izay mpitarika no fitaovana lehibe amin'ny fandresena ny korontana ny taona 1990. Ao ambanin'ny fotoam MGIMO dia nanomboka tamin'ny fandaharana feno ny toetr'andro sy ny zava-baovao fanabeazana, anisan'izany ny fampidirana akaiky kokoa amin'ny fampianarana ambony Eoropeana, amin'ny alalan'ny fidirana ho ao an-Bologna dingana, ny Nanitatra ny fifandraisana iraisam-pirenena, ary ny isam-ponina ao amin'ny Institute ho lohalaharana ny iraisam-pirenena ny fanabeazana sy ny siansa.
In 1994 MGIMO nomena sata University. Toy izany koa nahita ny taona fananganana ny Fikambanana Iraisam-pirenena ny Administration, taorian'ny fanapahan-kevitry ny governemanta Rosiana amin'ny fitantanana ny governemanta sy ny fitantanana monisipaly fanofanana. 1998 nahita ny nanorenana ny Sekolin'ny siansa politika, ny voalohany ny karazana tao Rosia mba hifantoka amin'ny fanompoana ho an'ny besinimaro fampiofanana mpitantana.
In 2000 ny International Institute of politikan'ny angovo sy ny Fifampiraharahana Iraisam-pirenena dia naorina, ambanin'ny aegis ny MGIMO, amin'ny fandraisana an-tanana ny mpitarika orinasa Rosiana angovo. Ny asa nanirahana ny Institute dia ny hampiofana mpitantana ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena angovo.
Ny Eoropeana MGIMO Fanabeazana Institute naorina tany 2006, mampiseho mpiara ezaka avy amin'ny Federasiona Rosiana sy ny Vondrona Eoropeana mba handamina fandaharam-pampianarana mitohy ho an'ny manam-pahefana Rosiana sy ny Eoropeana.
2011 dia nahita ny nanorenana ny tanora indrindra MGIMO sekoly, ny Sekoly Applied Toekarena sy ny varotra. Tsy manam-paharoa noho ny BA sy ny fandaharana ao amin'ny Wildlife Ecology Management, izay mampivelatra fahaizana eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny tontolo iainana olana.
Isan-taona manaiky MGIMO mihoatra ny arivo ireo mpianatra vaovao, avy amin'ny tapany rehetra ao amin'ny Federasiona Rosiana, ary mihoatra noho ny avy amin'ny iraisam-pirenena 60 firenena. Over 35 arivo Rosiana sy maneran-Alumni Mirehareha mba nahavita ny fianarana avy any Moscou Institute of State Fifandraisana iraisam-pirenena. Antokon'ny MGIMO Alumni Association mavitrika any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. In 2007, ny MGIMO Alumni Association nametraka Rosia oniversite voalohany fanafiana masina - ny Development Foundation for MGIMO.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny Map
Photos: State Institute of Moscow Fifandraisana iraisam-pirenena ofisialy Facebook
Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Institute of Moscow-panjakana Fifandraisana iraisam-pirenena.
St. Petersburg State University ny Fifandraisan-davitra Saint Petersburg